Spiral 2, maodely maodely voalohany amidy amin'ny Project Ara | Androidsis
Ny alarobia lasa teo ny ekipa ao ambadiky ny Project Ara, na Tetikasa Ara, nanao kaonferansa tao amin'ny foiben'ny Google any Mountain View. Ao hoy ny goavana nampita ny fifandraisana Spiral 2, finday avo lenta voalohany natolotra amidy.
Efa ela no niandrasanay ny hamidin'izy ireo hamidy finday avo lenta voalohany an'ny Project Ara ary tonga io andro io ihany. Fantatray aza ny toetra ara-teknikan'ity fitaovana maodely vaovao ity.
Spiral 2 no finday finday modular voalohany an'ny Google sy ny Project Ara-ny
Ny Spiral 2 dia hanana efijery misy tontonana iray izay mahatratra ny vahaolana 720 x 1280 teboka. Mikasika ireo mpikirakira, amin'izao dia misy a Module NVIDIA miaraka amin'ny processeur Tegra K1, ary amin'ny lafiny iray hafa dia Marvell PXA1928, na dia antenaina aza fa Qualcomm dia hanolotra kinova modular feno an'ny Snapdragon tsy ho ela koa.
Ho an'ny ambiny, mahita terminal kely tsotra izahay, miaraka amin'ny Fakan-tsary 5 megapixel, ankoatry ny fananana fifandraisana 3G, Wi-Fi ary Bluetooth. Mazava ho azy, amin'ny ho avy dia hisy modely miaraka amin'ny fifandraisana LTE. Etsy ankilany, ny telefaona maodely Spiral 2 dia manana bateria miaraka amin'ny fampisehoana eo anelanelan'ny 20% sy 30% ambany noho ny finday avo lenta mahazatra.
Spiral 2 dia miorina amin'ny MDK kinova 0.20 izay navoakan'ny mpanamboatra tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Miasa amina modely miova miiba 11 amin'ny modely misy fitaovana samihafa izy ireo, na dia amin'ny ho avy aza dia te-hamoaka kinova ahafahan'ny modules 30 miisa XNUMX izy ireo.
Ny antsipiriany miavaka dia ny Ny Spiral 2 dia mamela ny famindrana modules mafana, tsy mila mamono ny telefaona.
Spiral 2 no andrasana hamely Puerto Rico amin'ny faran'ity taona ity, hahatratra any Etazonia any aoriana. Ity fomba ity dia manana fotoana handalovana amin'ny FCC i Google fa tsy misy olana. Na ny tsaho aza dia manomboka mivezivezy momba ny smartphone vaovao miaraka amin'ny bateria tsara kokoa sy ny fifandraisana 4G LTE toy ny mahazatra. Mety ho Spiral 3 ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Spiral 2, maodely modular voalohany amidy avy amin'ny Project Ara